Robin Nottingham Raiders oghere nyocha (RTP: 96.07%) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Robin Nottingham Raiders bụ oghere na-atọ ụtọ nke Peter & Sons mebere ma rụọ ọrụ site na Yggdrasil Gaming. Familiardị egwuregwu a maara nke ọma ga-akpọghachite gị na Nottingham dị ka ihe sochiri oghere Robin Sherwood Marauders.
Reels: 5Rows: 4RTP: 96.07% Min nzọ: £ 0.2Max nzọ: £ 10Paylines: 20Max mmeri: 121 500x
Robin Nottingham Raiders oghere imewe
Dị ka aha ya na-egosi, a na-etinye Robin Nottingham Raiders na Nottingham nke ghọrọ onye ama ama maka ịnọ na akụkọ Robin Hood. Site n’ike mmụọ nsọ Robin Hood, onye bụ isi na egwuregwu ahụ aha ya bụ Robin na-ezuru ndị ọgaranya iji nyere ndị ogbenye aka.
Robin Nottingham Raiders nwere eserese dị elu nke nwere ụdị eserese. Ga-achọpụta na azụ ala igwe ndị ahụ bụ Nottingham nke edepụtara site na iji ụdị Peter & Sons. N’ihe banyere igwe okwu ya, onye nrụpụta jikọtara ya na nke mgbe ochie na – emecha isiokwu ya. Ewepu akara ọla edo na ọla ọcha, enwere akara ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ na-acha ọkụ.
Malite na akara ngosi ya ndị na-akwụ ụgwọ dị ala, e nwere mma agha, ụkwụ ọkụkọ, okpara, ụdị akụ, ụta na iko. Enwekwara akara ngosi dị ka King John, Maid Marian, nwoke nwere ihe mkpuchi ígwè, Friar Tuck na Robin.
Robin Nottingham Raiders atụmatụ
N’ileghachi anya na okporo Robin Nottingham Raiders, anyị hụrụ ka egwuregwu ya si dị ike. Njirimara ya gụnyere ihe dị iche iche iji jide n’aka na ọ bụghị naanị ntụrụndụ kamakwa ọ na-akwụghachi ụgwọ mgbe a bịara n’ihe nrite. Yabụ, na-atụ anya ịhụ ụfọdụ akara anụ ọhịa yana Multipliers, Nzaghachi, na n’ezie, Bonus Spins.
Na mpaghara egwuregwu ya na 5 na 4 ahịrị, Respins na Bonus Spins bụ isi ihe ị na-ekwesịghị ịhapụ. Mana nke mbụ, ka anyị lelee nkọwa gbasara akara anụ ọhịa ya na akara akara ndị na-arụ ọrụ dị mkpa na njirimara ndị a.
Ihe Ngosi Ohia
Ọtụtụ oge, egwuregwu oghere nwere otu ụdị akara ọhịa. Ọ nwere ike gbapụta na ihuenyo n’oge egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ ọbụna n’oge egwuregwu ego iji dọta ihe ndị ọzọ na-emeri. Ma na Robin Nottingham Raiders, ọtụtụ akara ngosi anụ ọhịa nwere ike ịpụta na ntanetị ma nyere gị aka imeri karịa. Enwere akara akara ọla ọcha na ọla edo nke gosipụtara ihu eze.
Anụmanụ ọlaọcha ọhịa = nke a bụ akara akara mgbe niile ma ọ bụ nke ọfụma nke nwere ike ịpụta na ebe ọ bụla. Dị ka akara anụ ọhịa ndị ọzọ, Silver Coin na-arụkwa ọrụ dị ka akara nnọchi na akara akara mgbe niile. Ya mere, ọnụnọ ya na ntanetị nwere ike iduga nchikota nke njikọta ọhụụ.Wild Gold Coin = Gold Coin bụ akara ngosi anụ ọhịa pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere Silver Coin. Mgbe obula akara a rutere n’elu wiil, a ga-achikota ya site na mita n’aka nri nke okporo. Mita a nwere oghere 9 nke chọrọ akara 9 Gold Coin Wild iji rụọ ọrụ otu n’ime isi atụmatụ egwuregwu ahụ.
Ọnụ, ego ọla edo na ọla ọcha ọlaọcha nwere ike inyere gị aka ịkpalite mmeri ugboro ugboro na oge egwuregwu gị niile.
Ebe ọ bụ na Robin Nottingham Raiders na-enye Spins Spins, na-atụ anya na e nwekwara ihe nnọchianya gbasara agba gburugburu. Ihe ngbasa akara bu igodo iji megharia udiri ego a nke na-enye Bonus Spins.
Dịka e kwuru n’elu, Robin Nottingham Raiders nwere ụdị anụ ọhịa 2 nke nwere ike ịdakwasị na-esi na ya. Ihe ngosi ohia ndia nke nwere ihu eze adighi aru oru dika ndi ozo kama obu igodo nke isi. Ozugbo ị chịkọtara akara ngosi 9 Gold Coin Wild niile, atụmatụ Respin ga-amalite. N’oge atụmatụ Respin, a ga-agbakwunye akara ngosi anụ ọhịa niile ị chịkọtara na ntanetị.
Gold na ọlaọcha anụ ọhịa nwere ike ịgbapụta ebe ọ bụla na mpaghara egwuregwu iji nyere gị aka ịme ngwakọta na-emeri. Ọ bụrụ na ị kpatara Respins na Bonus Spins n’otu oge ahụ, a ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ nke Respins.
Iji banye gburugburu ma nweta Robin Nottingham Raiders ‘Bonus Spins, ịkwesịrị ị nweta ala ma ọ dịkarịa ala akara 3 Scatter. Dị ka akara anụ ọhịa, akara ndị a na-agbasasị nwere ike ịpụta na ọnọdụ aghara wee nye gị 15 Spins Spins iji nwee obi ụtọ. N’ime oge ego a, ị ga-elezi anya maka akara Scatter na Gold Coin Wild iji nweta ọtụtụ ụgwọ ọrụ.
Maka 3 Gold Wilds ị chịkọtara n’oge a, a ga-akwụghachi gị ụgwọ 3 Bonus Spins. N’otu oge ahụ, a ga-agbakwunye anụ ọhịa ndị na-ebute mgbapụta na mgbakwunye.
Dị iche na akara ngosi oge pụrụ iche na nke pụrụ iche, a na-akpọ ihe ndị ọzọ na-akpalite Wilds n’oge agba gburugburu Roaming Wilds. You nwere ike ịnakọta ngụkọta nke 9 Roaming Wilds n’otu oge n’oge ego ego ma nweta Multipliers! Ndị na-agagharị n’okporo ọhịa jupụtara na Multipliers ndị a nwere ike ịkwalite ịkwụ ụgwọ gị:
3 Na-agba ọsọ Wilds = 2x Multiplier4 Na-agagharị Na-agagharị = 3x Ntughari
Ọ bụrụ na ị nweta karịa otu Multiplier, a ga-amụba Multipliers gị na ibe gị maka mmụba ọzọ.
Robin Nottingham Raiders RTP, ịkụ nzọ na onyinye
Robin Nottingham Raiders nwere 20 nkwụnye ụgwọ nkwụnye ụgwọ ebe ị nwere ike ịkụ nzọ £ 0.20 na £ 10 kwa ntụgharị. Iji merie ngwakọta na-emeri, ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala akara ngosi 3 dabara na akara ịkwụ ụgwọ nke na-amalite site n’akụkụ aka ekpe.
Onu ogugu nke Robin Nottingham Raiders ‘RTP bu 96.10% ya mere obu na onodu ogugu nke dabere na onodu ulo oru. Nke a oghere egwuregwu nwekwara nnukwu volatility otú winnings agaghị abịa mfe dị ka na ala obodo egwuregwu. Agbanyeghị, Robin Nottingham Raiders nwere ugboro 25.46%, mmeri na ebe a na-eweta nnukwu ụgwọ ọrụ.
N’ịga n’ihu na akara ya, akara ngosi ya na-akwụ ụgwọ na-agụnye ụkwụ ọkụkọ, iko, mma agha, ụta, akụ nke akụ, na bat. Ka ọ dị ugbu a, akara ngosi a na-akwụ ụgwọ dị elu gụnyere nwoke nwere ihe mkpuchi ígwè, Robin, King John, Friar Tuck, na Maid Marian. Onyinye akara ngosi na-akwụ ụgwọ ga-akwụ gị 5x na 10x osisi gị ebe ị ga-ejikọ akara 5 Silver Wild nwere ike ịkwụ gị 25x osisi gị.
Robin Nottingham Raiders enweghị jackpot na-aga n’ihu mana mmeri kachasị elu ị nwere ike ịnweta bụ ihe ruru 121,500x osisi gị. Enwere ike ịgbanwe nke a ihe ruru £ 1,215,000 ma ọ bụrụ na ịhọrọ nzọ kacha elu. Ma, nke a bụ egwuregwu na-agbanwe agbanwe nke mere na ihe egwu dị oke elu.
Robin Nottingham Raiders Mmechi
Robin Nottingham Raiders bụ ihe ọzọ dị mma na nchịkọta egwuregwu nke Yggdrasil Gaming. Ọ na-enye otu n’ime nnukwu ihe nrite jackpot n’agbanyeghị ọkọlọtọ RTP ya na ugboro ugboro. Anyị na-achọkwa na o nwere ọtụtụ akara akara anụ ọhịa nke nwere ike ịdakwasị na-enyere gị aka inweta ụgwọ ọrụ dị elu.
Yabụ, enwere akara ndị ọzọ ị ga – atụ anya karịa otu ụdị akara ọhịa nke nwere ọtụtụ ọrụ. Ihe nnọchianya ndị a na-agbakwunye na ihe ndị ị na-ekwesịghị ileghara iji nyochaa na Robin Nottingham Raiders. N’ezie, egwuregwu a nwekwara ọnụahịa ịkụ nzọ dị ọnụ ala ka ọbụnadị ndị na-enweghị ego na ndị ọghọm nwere ike ịnụ ụtọ ya. Site na nzọ dị elu dị ala, ịnwere ike ibalite atụmatụ Robin Nottingham Raiders ma nweta ohere kụrụ nnukwu ụgwọ ọrụ.
Kedu ihe bụ RTP na oghere Robin Nottingham Raiders?
Oghere Robin Nottingham Raiders nwere 96.07%, RTP, aka Laghachi na Player. A na-ewere nke ahụ dị ka nkezi.
Gịnị bụ volatility na Robin Nottingham Raiders?
Robin Nottingham Raiders bụ oghere dị elu.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Robin Nottingham Raiders?
Robin Nottingham Raiders sitere na Peter & Sons na Yggdrasil tọhapụrụ ya.
Nkezi ogo: nyocha 0
Tags:Nottingham Nyocha oghere Raiders Robin RTP
Mee ka izu gị na-atọkwu ụtọ! Chọta self ọhụụ, ihe …